Ny sary maritrano tsy manam-paharoa an'ny mpanakanto Japoney Emi Nakajima | Famoronana an-tserasera
Emi Nakajima dia mpanakanto japoney tsara tarehy 21 taona, teraka tamin'ny 1995 tamin'ny 4 febroary teo sary amin'ny mari-trano mahavariana. ny mpanakanto mpahazo maso no Kei Meguro, ny sarimihetsika ankafiziny dia avy any Marvel sy Disney, ary ireo vondrona mozika ankafiziny dia i Taylor Swift, Ariana Grande ary Owl City. Izy dia mahazatra amin'ny instagram, izay anaovany fampiratiana ny asany. Amin'ny faran'ny lahatsoratra dia avelanay ho anao ny azy Instagram raha te hanaraka azy ianao.
Ny teknikanay dia lavitra tsy tonga lafatra, fa eo am-panatanterahana izany. Tsy robot na mpanonta aho. Araka ny nambaran'ny mpanakanto Japoney.
Ny fitiavany dia ny manintona katedraly sy tranobe tandindona toa ny big ben (London), La Sagrada Familia (Barcelona, ​​Espana), Castle Budapest (Hongria),Wat arun (Thailand), Sns Miaraka daholo ny trano tsy misy fetra ny antsipiriany izany dia mitandrina ny ambony indrindra, satria azonao atao ny mandray an-tsary ilay horonan-tsary kely napetrakay teo aloha, ary amin'ny galeria manaraka izay asehonay anao etsy ambany. Manantena aho fa tianao ny sary, antsipiriany ary ny ezaka ataonao.
Katedraly Masindahy John
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny sary maritrano tsy manam-paharoa an'ny mpanakanto Japoney Emi Nakajima